Linux 4.18 Regedza!: Isu tatova neiyo nyowani kernel vhezheni kunze ... | Linux Vakapindwa muropa
Linux 4.18 Regedza!: Isu tatova neiyo nyowani vhezheni yekernel kunze ...
Linus Torvalds, musiki, senguva dzose, anga ari mutariri wekuzivisa kuburikidza neemail pane kernel kana LKML tsamba yekutumira kuti iyo nyowani vhezheni yeLinux kernel yatove mumugwagwa uye yakagadzirira kurodha pasi uye kushandiswa nevashandisi vavanoda . Kunyanya, ndiyo Linux 4.18 izvo zvakaitwa kuti zvimirire zvishoma sezvakataurwa naLinus nekuda kwematambudziko avakave nawo uye izvo zvakaita kuti kugadziriswa kwekodhi kunonoke kutanga kwayo nevhiki.
Linux 4.18 ikozvino yakagadzirira uye inoshanda mushure mevhiki rakadzikama maererano nebasa reTorvals iye nevamwe vese vanogadzira kernel. Iyo itsva vhezheni inosvika ne zvimwe zvitsva, kunyanya zvine chekuita ne network, inova ndiyo yakanyanya kuitiswa basa, uye kunyanya mushure mematambudziko ekukuvadzwa ayo akanganisa teki yeTCP uye inogona kuita kuti masisitimu atapurirwe neDoS kurwisa sezvataona. mazuva ano ...
Asi iyo netiweki stack yanga isiri iyo yega chikamu chekernel yakawana kutarisirwa, futi vamwe vatongi uye masystems Vakagamuchira zvimwe zvigadziriso uye kugadzirisa, senge vfs, iyo SCSI, network uye i2c madhiraivha, kumwe kugadziridzwa kwakasarudzika pano nepapo (ARM crypto, PARISC memory, nezvimwewo). Mazhinji ematehwe aya kana kunatsiridzwa anozosanganisirwa mushanduro dzakapfuura dzeiyo kernel yekuvandudza mavhezheni apfuura ayo achiri kuchengetedzwa. Ino yave nguva yekutarisa vhezheni 4.19 uye kubva zvino zvichienda mberi basa rekuvandudza rekugadzirira kwayo rinotanga.
Nenzira mhando 5.0 izvo zvaizotanga iro 5.x davi reLinux kernel yaifanira kunge yatosvika kare, ino mwaka wezhizha uye pakasvika mamirioni ezvinhu zvegit sezvakataurwa naTorvalds pachake uye sezvaakaitawo ne3x. Kune rimwe divi, sezvaunozoona, harina kusvika uye haritarisirwe nekukasira. Torvalds akatsanangurawo kuti hapana chikonzero cheizvi, saka isu tichaenderera ne4x kwemamwe mwedzi mishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 4.18 Regedza!: Isu tatova neiyo nyowani vhezheni yekernel kunze ...